နိုငျးနိုငျးက သားသမီးတှကေို ဘာလို့ လယောဉျကှငျး လိုကျမပို့ခိုငျးတော့တာလဲ | Akonthi
နိုငျးနိုငျးက သားသမီးတှကေို ဘာလို့ လယောဉျကှငျး လိုကျမပို့ခိုငျးတော့တာလဲ
သရုပျဆောငျ နိုငျးနိုငျးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ခဏနားခြိနျမှာ မိသားစုရှိတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံကို ပွနျလရှေိ့ပွီး အလုပျကိစ်စကွောငျ့ မွနျမာပွညျ ပွနျလာတဲ့အခါ သားသမီးတှကေို လယောဉျကှငျးအထိ လိုကျမပို့ခိုငျးတော့ပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့ အဲဒီလို လိုကျမပို့ခိုငျးတော့တာလဲ…???
ရိုကျကူး/မေးမွနျး - နိုငျလငျး၊ အိဖွူသိမျ့
တညျးဖွတျ - ထကျပိုငျစိုး
နိုင်းနိုင်းက သားသမီးတွေကို ဘာလို့ လေယာဉ်ကွင်း လိုက်မပို့ခိုင်းတော့တာလဲ
သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ခဏနားချိန်မှာ မိသားစုရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြန်လေ့ရှိပြီး အလုပ်ကိစ္စကြောင့် မြန်မာပြည် ပြန်လာတဲ့အခါ သားသမီးတွေကို လေယာဉ်ကွင်းအထိ လိုက်မပို့ခိုင်းတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို လိုက်မပို့ခိုင်းတော့တာလဲ…???
ရိုက်ကူး/မေးမြန်း - နိုင်လင်း၊ အိဖြူသိမ့်
တည်းဖြတ် - ထက်ပိုင်စိုး